Tsy mankasitraka vehivavy miakanjo maivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2008 16:24 GMT
Sarimbehivavy tsy manao Hijab, asehon'ny gazety miseho isan'andro, nanoratra momba ny fankalazana ny andron'ny fampianarana tany Bahrain, andro koa fanomezam-boninahitra ny mpianatra mahay indrindra, no niantombohan'ny raharaha. Mitaraina i Jaffar:
من خلال تصفحي لجرائدنا المحلية الأسبوع الفائت.. كنت أشاهد صور كثيرة لفعاليات عيد العلم وأخذت أقلب الصور وأفكر فيها.. صور نساء بعضهم بدون حجاب وبعضهم بلبس فاحش لا يتقبله إسلامنا.. هل نطلق على هؤلاء مسلمون وهل هذا بلد الإسلام.. أصبحت هذه الصور تعرض في صحفنا وفي شاشات التلفاز ونشاهد هذه المشاهد حية أيضا عند زيارة الاماكن العامة كالمجمعات والمنتزهات.. فكيف وصلنا إلى هذ الحد وما الفرق بيننا وبين الدول الغير مسلمة..
“Raha namaky gazety aho tamin'ny herinandro, nahita sary betsaka momba ny fankalazana ny andron'ny fampianarana. Mamadika pejy aho ary manomboka mahita sarim-behivavy tsy manao Hijab, ny sasany ary manao akanjo tsy mendrika, tsy azo ekena mihitsy izany amin'ny fivavahana islamika. Silamo ve ireny olona ireny ar milaza ve isika fa firenena silamo ? Ireo sary ireo aseho izao gazety sy sary fahita lavitra ary koa amin'ny toerana itambarana toa ny fivarotana sy ny zaridaina. Ahoana no nahatonga antsika toa izao ary inona no mahasamihafa antsika amin'ny firenena tsy silamo ?
Avy niresaka eo amin'ireo nahazo diplaoma manao akanjo maivana, izay koa nisy ny tena mahay indrindra sy nahazo ny Masters sy PhDs-ny, dia miresak aindray i Jaffar ny dokam-barotra ao amin'ny fahita lavitra. Hoy izy:
Sary mitovy no miverimberina amin'ny dokam-barotra miseho amin'ny fahita lavitra. Raha dokam-barotra ho an'ny savonim-bolo, na savonim-batana na fanesoram-bolo, dia hitantsika misy tovovavy anaty trano fisasana, mampiseho ny volony sy vatany toa ny tendany, lamosiny, ranjony. Dia mihomehy isika toa ny hoe zavatra tsy misy dikany izany.
Dia mizara resaka nifanaovany tamin'ny mpiara-miasa taminy i Jaffar ary hoy izy :
Niampanga ny fisian'ny sarina modely avy any ivelany tao anaty gazety Bahrainy ny mpiray miasa tamiko iray omaly. Dia hoy aho hoe ilay gazety no tokony tsikeraina nametraka ny sariny tao. Fa kosa, ny fampisehoana sary toa ireny anatin'ny fiaraha-monina Bahraini, ampisehoana vehivavy eo anivon'ny toe-javatra tsy mendrika eo imason'ny fivavahana silamo, dia azo iampangana ny fiaraha-monina manontolo.
Mametraka hafatra eo amin'ny lahatsoratra i JR baky :
Lasa zatra mahita ireny sary ireny isika ary efa lasa ireny no norm ao anatin'ny fiaraha-monina silamontsika !!! Mino aho fa vehivavy tsy mino, tsy manana kolontsaina sy mivoatra ara-pisainana ary tsy maka andraikitra ireny vehivavy tsy manao hijab ary koa manao akanjo mahamenatra ireny.
Ny tena anton'ity dia ny manodidina, ny fiaraha-monina hiainantsika… ny fianakaviany izany. Angamba io ramatoa io dia nolehibeazina tao anaty akany tsy niraharaha hijab. Ny fivavahana silamo tsy manery ny hijab amin'ny vehivavy… tokony resy lahatra sy faly anaty izy mianao hijab. Tsy misy terena izany. Ny sary hitantsika amin'ny dokam-barotra dia izany fotsiny ihany – ho an'ny varotra. Fitadiavam-bola. Izany no antony ahitantsika vehivavy vonona mamelatra satria tanora. Hitanao ve ny fivarotany tena mora ??
Nosoratan'i Amira Al Hussaini
Tena “lohataonan-dahatsoratra” tato ho ato 🙂 miverina mamelana ireto dikan-dahatsoratra maro. Faly mamaky anao eto indray ry Mialy.
07 Marsa 2008, 20:39